Orinasan-tànana fehin-tànana Lanyard - mpanamboatra sy mpamatsy fehin-tànana any China
Ireo bracelet lanyard dia azo jerena be amin'ny boutiques. Ireto bracelet ireto dia mety amin'ny doka, fampiroboroboana, fanehoana ny toe-tsain'ny ekipa, fanohanana ekipa fanatanjahan-tena ankafizinao, na fampisehoana fomba amam-panao fotsiny. Tsy toy ny fehin-tànana nentim-paharazana, manana tombony amin'ny vidiny ambany, lanja maivana ary sary famantarana namboarina. Izy io dia azo namboarina niaraka tamin'ny fanampian'ny fitaovana, loko, sary famantarana ary kojakoja samihafa. Izy io dia voaravaka amin'ny fiarovana azo antoka na fanidiana fanidiana. Ny fanidiana mihidy dia mety hahatonga ireo fehin-tànana hifanaraka amin'ny tanana. Ny felatanana fametahana dia azo vokarina amin'ny neoprene na ny fitaovana lekab, manana ny fehy vy ao anatin'ny fehin-tànana izy. Ny habeny mahazatra dia 230 * 85mm. Ny brasele vita amin'ny kofehy dia namboarina kokoa satria azo kofehy amin'ny lamina isan-karazany. Ny habeny mahazatra dia 360 * 10mm, ny habe iray dia mifanentana indrindra (mifanaraka amin'ny 6 '' ~ 8 '' boribory faribolana). Raha tianao ny habe namboarina dia raisina an-tanan-droa. Ny fitaovan'ny brasele vita amin'ny kofehy dia nylon na polyester. Ny logo dia mety fanontana silkscreen, sublimated, tenona sns. Mba hahatonga ny sary famantarana miavaka, ny tonga eto aminay no safidinao tsara indrindra. Amin'ny maha-mpanome serivisy tokana anay dia hanolotra andiana vokatra ao anatin'izany ny famonosana azy. Mifandraisa aminay izao, aza avela hiala ny vintana.